Policy 【Nidaamka cookie】
Hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato isticmaalka cookies-ka websaydhkan https://codigosfreefire.gratis, waxaad joogtaa meesha saxda ah. Marka xigta, waxaan sharaxaad ka bixin doonnaa sida saxda ah buskudyadu yihiin; nooca buskudka aan u isticmaalno iyo ujeedka laga leeyahay; iyo sida aad ugu adeegsan karto xaqa aad u leedahay inaad qaabeyso biraawsarkaaga oo aad u diiddo isticmaalka midkoodna.
Dabcan, waa inaad ogaataa in haddii aad go'aansato inaadan isticmaalin qaar ka mid ah cookies, websaydhkan ayaa laga yaabaa inuusan sifiican u shaqeynin, taasoo saameyn ku leh khibradahaaga isticmaale.
WAA MAXAY CARUUR
Una cookie Waa fayl loo soo degsaday kombuyuutarkaaga markii aad galeysid bogag internet ama bogag internet ah.
ka cookies Waxay u oggolaadaan boggaas, iyo waxyaabo kale, inay kaydiso ama soo ceshado macluumaadka ku saabsan caadooyinkaaga biraawsarka ama qalabkaaga, waxayna kuxirantahay macluumaadka ay ka kooban yihiin iyo habka aad u adeegsato qalabkaaga, waxaa loo isticmaali karaa inay ku aqoonsadaan.
Isticmaalaha bog furaha ayaa xasuusiyaa cookies-ka diskiga adag oo keliya inta lagu gudo jiro kalfadhiga hadda jira, isagoo ku mashquulsan meel ugu yar xusuusta isla markaana aan waxyeelayn kombuyuutarka. Kukiyada kuma jiraan nooc kasta oo macluumaad shaqsiyeed gaar ah, badidoodana waxaa laga tirtiraa hard-ka dhamaadka dhamaadka kalfadhigga biraawsarka (waxa loogu yeero kalfadhiga xisadda).
Inta badan daalacayaashu waxay aqbalaan cookies sida caadiga ah, iyaga oo si madax-banaan, u oggolaan ama ka hor-tagaan cookies meel ku-meel-gaadh ah ama nabadgelyo ah.
Kukiyada waxay la xiriiraan biraawsarka, maahan qofka, sidaa daraadeed badanaa ma keydin karaan macluumaadka xasaasiga ah ee adiga kugu saabsan sida kaararka deynta ama faahfaahinta bangiga, sawirada ama macluumaadka shaqsiyeed, iwm. Xogta ay hayaan waa farsamo, tirakoob, doorbid shaqsiyadeed, shaqsi ahaaneed, iwm.
XUQUUQDA MADAXWEYNAHA: DIIWAANGALINTA EE CODKA
Markii aan galno degelkan, iyo iyada oo la raacayo qawaaniinta hadda jira ee ku saabsan ilaalinta xogta, waxaan ku ogeysiinaynaa isticmaalka cookies-ka, waxaan ku siineynaa ikhtiyaar ah inaad si cad u aqbasho iyaga iyo u helitaanka macluumaad dheeri ah iyada oo loo adeegsanayo Nidaamka Kukiyada.
Waa inaad ogaataa in, haddii ay dhacdo inaad sii waddo baaritaanka, inaad siinaysid oggolaanshahaaga isticmaalka cookies-ka. Laakiin, wakhti kasta, waad beddeli kartaa maskaxdaada oo waxaad xannibi kartaa isticmaalkeeda biraawsarkaaga.
Nabadgelyadaada guud ee maskaxdaada, websaydhkan wuxuu la jaan qaadayaa qodobbada qawaaniinta hadda jira ee la xiriira isticmaalka cookies-ka iyo macluumaadkaaga shaqsiyadeed:
Xeerka LSSI-CEBulshada Macluumaadka iyo Sharciga Ganacsiga Elektarooniga)
El RGPD (Xeerka (EU) 2016/679 ee baarlamaanka Yurub iyo Golaha Abriil 27, 2016 ee ku saabsan ilaalinta dadka dabiiciga ah), kaas oo mideeya qawaaniinta ka shaqeynta xogta shaqsiyadeed ee wadamada EU.
Nidaamkan Kukiyada waa la beddeli karaa wakhti kasta si loogu waafajiyo qawaaniinta cusub ama isbeddelada ku saabsan waxqabadyadeena, midka lagu daabacay websaydhka oo ah mid hadda socda.
Si laguu siiyo khibrad adeegsi oo wanaagsan, hel xogta falanqaynta, kaydso oo dib u soo cesho macluumaadka ku saabsan caadooyinkaaga daalacashada ama kombuyuutarkaaga oo aad horumariso hawsheeda, degelkan https://codigosfreefire.gratis, Waxay isticmaashaa buskuddeeda iyo qayb saddexaad.
Noocyo nooc ah buskud noocee ah ayaa mareegtan loo adeegsadaa
Kukiyadaha farsamada: Kuwaasi waa kuwa u oggolaanaya adeegsadaha inuu dhex maro bogga internetka, masraxa ama arjiga oo adeegsado xulashooyinka kala duwan ama adeegyada ka jira, tusaale ahaan, xakameynta taraafikada iyo isgaarsiinta xogta, aqoonsashada fadhiga, marin u hel qaybaha xaddidan, xusuuso waxyaabaha ka amar qaata, fuliya hannaanka iibsashada amar, codsi diiwaangelin ama kaqeybgal dhacdo, isticmaal qodobbada amniga inta lagu gudajiro, keydiso waxyaabaha loogu talagalay faafinta fiidiyowyada. ama cod ama wadaag waxyaabaha ku jira shabakadaha bulshada.
Shaqsiyeynta cookies: Waa kuwa u oggolaanaya adeegsadaha inuu adeegsado adeegga leh sifooyin guud oo hore loo sii qeexay oo ku saleysan shuruudaha taxanaha ah ee marinka isticmaalaha, sida luqadda, nooca biraawsarka ay u adeegsadaan adeegga, qaabeynta goboleed halka aad ka hesho adeega, iwm.
Falanqaynta cookies: Iyagu waa kuwa si wanaagsan noola dhaqmay anaga ama dhinac saddexaad, waxay noo oggolaadaan in aan tirino tirada isticmaaleyaasha oo aan sidaas u fulinno cabbirka iyo falanqaynta tirakoobka ee adeegsiga ay adeegsadeen isticmaaleyaasha adeegga la soo bandhigay. Tan darteed, raadintaada bogga websaydhka ayaa la falanqeeyay si loo hagaajiyo soo-saarka waxyaabaha ama adeegyada aan ku siinno.
Xayeysiiska xayeysiiska: Waa kuwa kuwa, si wanaagsan ula dhaqmay anaga ama dhinac saddexaad, noo oggolaanaya inaan u maareyno sida ugu hufan ee suurtagalka ah ee suurtogalka ah ee loo fidin karo goobaha xayeysiinta ee ku yaal websaydhka, ku waafajinta waxyaabaha xayeysiinta ka kooban waxyaabaha adeegga la codsaday ama isticmaalka ay sameyso. laga soo galo degelkayaga. Tan darteed waxaan falanqeyn ku sameyn karnaa hab dhaqankaaga internetka ee internetka waxaanan kuusoo bandhigi karnaa xayeysiin laxiriirta astaantaada baarista.
Kukiyadaha xayeysiinta akhlaaqda: Iyagu waa kuwa u oggolaanaya maamulka, sida ugu wax ku oolsan, ee meelaha xayeysiinta ah,, meeshii ay ku habboon tahay, tifatiraha in lagu daro bog degel, codsi ama goob laga helo adeegga la codsaday. Kukiyadaani waxay keydiyaan macluumaadka dabeecadaha isticmaale ee laga helo daawashada joogtada ah ee hab dhaqankooda sahaminta, iyagoo u oggolaanaya astaan ​​gaar ah in loo sameeyo si loo muujiyo xayeysiinta ku saleysan.
Kukiyada saddexaad ee xisbiga: Websaydhkan https://codigosfreefire.gratis, Waxaad u adeegsankartaa adeegyo dhinac saddexaad ah, kaas oo ku matalaya Google, inuu u ururin doono macluumaadka ujeeddooyinka tirakoobka, adeegsiga isticmaale ee bogga iyo bixinta adeegyada kale ee la xiriira howlaha bogga iyo adeegyada kale ee internetka.
Gaar ahaan, degelkani wuxuu adeegsadaa Google Analytics, waa adeeg falanqeeye websaydh ah oo ay bixiso Google, Inc. oo ku yaal Mareykanka kuna yaal xarunta 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043. Siinta adeegyadan, Google ayaa adeegsata Kukiyadaha macluumaadka aruuriya, oo ay kujiraan cinwaanka IP-ga isticmaale, kaas oo laisugu gudbin doono, ka baaraandegi doono oo Google kaydin doono iyadoo la raacayo shuruudaha websaydhka Google.com. Tan waxaa ku jira suurtagalnimada gudbinta macluumaadka la sheegay in loo gudbiyo dhinac saddexaad sababaha sharciga looga baahan yahay ama markii la yiri dadka saddexaad waxay socodsiinayaan macluumaadka iyagoo matalaya Google.
Maareynta iyo dib u isticmaal adeegsiga buugaagta
Waqti kasta, waad la qabsan kartaa goobaha biraawsarkaaga si aad u maamusho, u diiddo isticmaalka cookies-ka loona ogeysiiyo ka hor intaan la soo dejin.
Waxaad sidoo kale laqabsan kartaa jaangooyooyinka si markaas biraawsarku u diido dhammaan cookies, ama kaliya cookies laga bilaabo dhinac saddexaad. Oo weliba waad ka saari kartaa mid ka mid ah cookies taasi waa kooxdaada horayba.
Tan awgeed, waa inaad maskaxda ku haysaa inaad u baahan tahay inaad si gooni ah ula qabsato qaabeynta biraawsar kasta iyo qalabka aad isticmaasho tan iyo, sidii aan hore u soo sheegnay, cookies waxay la xiriirtaa biraawsarka, qofka ma ahan.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid Nidaamka Kukiyada, waxaad nala soo xiriiri kartaa adoo noogu soo diri doona emayl ahaan [emailka waa la ilaaliyay].